Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » American Airlines nandefa serivisy tsy an-kiato ho an'i St.Vincent
American Airlines dia hanao sidina tsy miato avy amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Miami mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Argyle amin'ny asabotsy 15 desambra 2018. Ny serivisy AA 1427 mandritra ny taona dia hiasa amin'ny Airbus A319 isaky ny sabotsy miala ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Miami amin'ny 11:00. maraina ary tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Argyle tamin'ny 3:40 hariva; ny tongotra miverina amin'ny sidina dia miala ao St. Vincent amin'ny 4:45 hariva ary tonga any Miami amin'ny 7:50 hariva
Rehefa nanambara ny serivisy tamin'ny Mey 2018, nanambara ny kaompaniam-pitaterana fa ny mpanjifany dia "hanana safidy vaovao handosirana ny hatsiaka amin'ny sidina mandavantaona sy mandavantaona kokoa." Ny Lehiben'ny Executive Executive ao amin'ny SVG Tourism Authority Andriamatoa Glen Beache dia naneho ny hafaliany tamin'ny fanambarana avy amin'ny American Airlines nilaza fa "ny fanaovana serivisy mivantana avy any Miami dia mpanakalo lalao ho an'ny firenena. Ity serivisy ity dia hanamora kokoa ny fitsidihan'ny mpitsidika, toy ny diaspora, hiala vakansy any St.Vincent sy Grenadines ”. Nanambara ihany koa izy fa "Miami ho iray amin'ireo ivon-toerana ifandraisana lehibe any Etazonia dia ho vavahady tena tsara ho an'ireo mpitsidika avy any Atlanta, Chicago, Dallas ary na dia i United Kingdom aza mba hahazo ilay hatsarana izay St.Vincent sy Grenadines."
Ny serivisy American Airlines nomanina serivisy tsy an-kijanona avy any Miami dia manome safidy ho an'ny mpitsidika sy ny Vincentians hitsangatsangana mivantana mankany sy avy any amin'ny toerana itodiana. Amin'izao fotoana izao, Caribbean Airlines dia miasa serivisy Alakamisy tsy an-kiato isan-kerinandro avy amin'ny JFK International, USA ary Air Canada Rouge serivisy tsy miato isan-kerinandro avy any amin'ny Pearson International, Canada. Manomboka amin'ny alahady 16 desambra 2018 ny Air Canada Rouge dia hanampy sidina tsy tampon-kerinandro faharoa mankany amin'ny toerana itodiana; ny sidina Alahady dia hiasa hatramin'ny volana aprily 2018. Ny fahatongavan'ireo mpitsidika an'i St.Vincent sy ny Grenadines tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny septambra 2018 dia mampiseho fitomboana 4.8% amin'ny fahatongavan'ireo mpitsidika mpitsidika, miaraka amin'ny fiakarana 12.6% avy any Etazonia ary 12.7 fiakarana% avy any Canada.
HTA: trano fandraisam-bahiny indroa miorim-pirinty Hawaii amin'ny taha onenana